Inkqubo yokuThengisa izindlu kunye nomhlaba-UkuKhangela iipropathi - UkuKhangelwa kwamakhaya
uJanuwari 10, 2017 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Inkqubo yokuthengisa izindlu nomhlaba
Ukusukela ngoku, ukukhangela kwearhente yokuthenga izindlu kuya kuba kokunethezeka ngakumbi ngefowuni entsha yearhente yesakhiwo yiRealtyWW.
Jonga uluhlu lwezinto ezithengiswayo okanye ungenise iintengiso zakho kwipropathi yakho mahala. Yonwabela ukukhangelwa kwepropathi kwiwebhusayithi yokuthengiswa kwearhente yehlabathi iRealtyWW Ulwazi olusebenzayo lokukhangela izindlu nomhlaba.
okwenyaniWW January 10, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi, Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ukuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Ipropathi yePropathi, Ipropathi yefowuni yePropathi, Inkqubo yokuKhangela iipropathi, Inkqubo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Inkqubo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Inkqubo yokuthengisa izindlu nomhlaba, Isixhobo sokuKhangela ukuHanjiswa kweeNdawo. Bookmark le Permalink.
Matshi 19, 2017 Ukunyuswa kweWebhusayithi yokuthengiswa kwezindlu, icandelo 1, Izalathiso Kule posi ndiza kudwelisa amakhonkco kwezinye iikhowudi zasimahla apho ungadwelisa khona iwebhusayithi yakho yearhente yaseGoodnewsrealty-Simahla- Isalathiso seNdawo yeNdawo yePropathi yakho kwiZibonelelo zeRhafu yeeNdawo zeReal Real-Simahla-kuKhokelo lweeNdawo zokuHlanganiswa kweeNdawo eziHlalwayo Iiwebhusayithi-zasimahla -Ukuqokelelwa kweWebhusayithi yeeNdawo eziPhucukileyo zeNdlela eshibhileyo yokuKhuthaza indawo yakho yeNdawo yokuThengisa - isimahla - indlela yexabiso eliphantsi lokukhuthaza iiNdawo zeNdawo zeNdawo yakho uLuhlu lweNdawo yeNdawo […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Matshi 27, 2017 Isikhokelo sokuqala sokubuya kwendlu ekhaya ekuzingeleni indlu Zombini ziyonwabisa kwaye ziyabhidisa ingqondo ukucinga kungekudala kwixa elizayo okanye ukuba sele ujongekile kwaye kwisithuba seenyanga ezimbalwa, unokufumana indlu yakho. Kuyonwabisa ukukhangela izindlu ezinokubakho kunye nokubona ingaphakathi lamaphupha akho; Kuyaphazamisa ukujonga onke amaxwebhu awoyikisayo kunye nezinye iinkqubo ekufuneka uzifezekisile. Xa ucinga wena neqabane lakho nikulungele ukuthenga indlu yosapho lwenu, musani ukungena ngaphakathi kwizindlu eziyimodeli niyazi kufutshane […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Ukuthengisa izindlu nomhlaba, Ukuqhubeka
Novemba 20, 2016 Iimpawu ze9 ezibi kuMenzeli wearhente enokubakho Umthengisi oqhelekileyo wokuthengiswa kwezindlu kunye nekontraktha ezimeleyo. Nokuba ungumthengi okanye umthengisi, ufuna ukuqinisekisa ukuba uqesha eyona arhente ethengisa izindlu nomhlaba ukuze uphathe intengiselwano yakho. Akufanelanga uvakalelwe ngathi akupheleli emgceni ukubuza imibuzo ngenani loluhlu alunikiweyo, kukangaphi evuma ukunxibelelana nawe, mangaphi amakhaya athe wawathengisa kwindawo yakho, kunye namanye afanelekileyo imibuzo. Zimbalwa iimpawu ezimbi xa kuziwa kwishishini lokuthengisa izindlu […] exhonyiweyo Ukuthengisa izindlu nomhlaba
Septemba 30, 2016 Kutheni le nto ufuna iinkonzo zokuRhweba ngoRhwebo lweNdawo? Kutheni le nto uyifuna? Ngaba iinkonzo zokushicilela iipropathi ziyinxalenye eyimfuneko yophuhliso lwamashishini kwi-Intanethi, ukukhuthaza amaziko, okanye ngaba, emva kwayo yonke loo nto, ikhonkco elingafunekiyo, umondli wabazalwana abahlukeneyo bababhali, ogcwele kuthungelwano lwehlabathi? Ngaba kunokwenzeka ukuba bayayixhasa ingcinga yokuba iinkonzo zokushicilelwa kwepropathi ziyimfuneko, nangona kunjalo onokuyenza ngaphandle kolu "lonwabo"? Kodwa masicinge ngemeko yovavanyo, kunye nomzekelo […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi